सरकारले रोक्यो कर्मचारीको परीक्षा - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
सरकारले रोक्यो कर्मचारीको परीक्षा
29 March, 2018 11:20 am
भरतपुर : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्र पठाएर पदपूर्ति रोक्न निर्देशन दिएपछि बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा आवश्यक पदपूर्ति गर्न समस्या देखिएको छ।
अति विशिष्ट सेवा सुरु गरेको भरतपुर अस्पतालमा सेवा सञ्चालनका लागि अस्पताल सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आवेदन खुला गरिए पनि मन्त्रालयले त्यसमा रोक लगाएको हो। लिखित परीक्षाका लागि भरतपुर अस्पतालमा प्रवेशपत्रसमेत वितरण गरिसकिएको भए पनि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भनिएको पदपूर्तिको सबै प्रक्रिया रोकिएको छ।
सुरुमा एमालेको भ्रातृसंगठन अनेरास्ववियु चितवनले परीक्षा स्थगन नगरे ‘अस्पतालमा भौतिक, नैतिक र मानवीय क्षति हुन सक्ने’ चेतावनी दिएको थियो। त्यसको बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिले अस्पतालमा ‘इमर्जेन्सी ल्याब’ सञ्चालन गर्न सकेको छैन। बिरामीको चाप बढेसँगै अत्यावश्यक सेवाका लागि छुट्टै ल्याब सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिए पनि त्यसका लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकेको छैन। अति विशिष्ट सेवा सञ्चालन सुरु गरेसँगै सघन उपचार कक्ष (आईसीयू), शल्यक्रियालगायतका बिरामीलाई तत्काल सेवा दिन छुट्टै प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न लागिएको थियो।
कर्मचारी अभावमा ल्याब सञ्चालन नभएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि कर्मचारी नियुक्तिसँगै सेवा सञ्चालनमा समस्या भएको छ। अस्पताल विकास समितिले गत पुस ३ गते अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। इमर्जेन्सी ल्याबका लागि माघ ८ गते चौथो तहका तीन र पाँचौं तहका दुई जनाका लागि आवेदन खुला गरिएको थियो।
चैत १० र ११ गते गर्ने भनिएको लिखित परीक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार स्थगन गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शम्भुकुमार कटुवालले परीक्षा सुरु हुनु एक दिनअघि पत्र पठाएर परीक्षा रोक्न निर्देशन दिएका थिए। एकै स्थानबाट सेवा दिन ढिलो भएपछि सेवा विस्तार गर्ने योजना मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अध्यक्ष राजकुमार राजभण्डारीले बताए।
मन्त्रालयले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको पनि पदपूर्ति रोक्ने प्रयास गरेको छ। अस्पतालले लोकसेवा आयोगको प्रामाणिक परामर्शअनुसार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेको हो। विरोधपछि मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीले परीक्षा स्थगनका लागि मौखिक आग्रह गरेकी थिइन्। क्यान्सर अस्पतालमा प्रक्रिया रोकिएको छैन। अनेरास्ववियुका कारण अस्पतालमा गर्ने भनिएको करारको पदपूर्ति भने रोकिएको छ। ‘लोकसेवाको नियमानुसार आयोगकै प्रतिनिधिले छनोट गर्ने नियमको विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेको हो’, कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले भने, ‘रोक्ने निर्देशन नभए पनि आसय त्यस्तै देखिएको थियो।’
अनेरास्ववियुले कर्मचारी नियुक्तिका लागि गरिएको प्रक्रिया रोक्न अस्पताल प्रमुखलाई धम्की दिएको थियो। अस्पतालमा स्थायी पदका लागि पनि आवेदन खुला गरिएको छ। अस्पतालमा विभिन्न तहका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता, फाइल बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि दुई सय ३८ जना कर्मचारी नियुक्ति गर्न आवेदन खुला गरिएको छ। (अन्नपुर्ण पोस्टबाट)